कुन फिल्मका लागि लिइयो नेपाली सेनाको अडिसन ? « Ramailo छ
कुन फिल्मका लागि लिइयो नेपाली सेनाको अडिसन ?
सन् १८१४ मा नेपाल र ब्रिटिश साम्राज्य बिच भएको युद्ध बारे पुस्तकमा पाठ नै पढाईन्छ । नालापानी युद्ध नेपाली सम्झिइ रहने ईतिहास हो । यही ईतिहासलाई लिएर निर्देशक रिमेश अधिकारीले फिल्म ‘नालापानी’ बनाउन लागि रहेका छन् । प्रोफेसर रामराजा कुँवर र डा.धन बहादुर कुँवरले लेखेको ऐतिहासिक पुस्तक वीर बलभद्र कुँवर’ मा आधारित रहि फिल्म बन्नेछ ।
फिल्म नालापानीको लागि कलाकारहरुको अडिस नेपाल आर्मी बाट भएको छ । फिल्मका धेरै दृश्य द्वन्द्वको हुने भएको र योद्दाहरुलाई तयार पार्न समय धेरै लाग्ने भएकोले पनि नेपाल आर्मीका जवानहरुलाई नै अभिनय गराउन लागिएको निर्देशक अधिकारीले बताउँछन् । फिल्ममा युद्दका दृश्य देखाउँदा प्राकृतिक हुनु जरुरी रहेकाले पनि आर्मीबाट नै कलाकारहरु छनौट भईरहेका छन् । यद्यपी प्रमूख भूमिकामा भने नेपाल आर्मीका कलाकार हुनेछैनन् ।
यो चलचित्र लाई नेपाली सेनाले पुराना हतियार, तोप, सैनिक कलाकार, सैनिक नियम तथा सैनिक नियमका लागि प्रशिक्षक लगायत सहयोग गरेको छ ।झण्डै ९ करोडको लागतमा निर्माण हुने बताइएको फिल्म नालापानी’ मा र्जनजंग शाही, नवल खड्का, मनोज शाक्य, पुजना प्रधान, ईशान बिजु श्रेष्ठ, विशाल श्रेष्ठ, गीता अधिकारी लगायतका कलाकारहरुको अभिनय रहनेछ ।
सम्राट शाक्य कार्यकारी निर्देशक रहेको फिल्ममा मजोन शाक्य निर्माताको रुपमा रहेका छन् । फिल्मको पटकथा तथा संवाद आशिष रेग्मीले लेखेका हुन् भने रोशन श्रेष्ठ फिल्मका द्वन्द्व निर्देशक हुन् । फिल्मको लगानी मात्रै ९ करोड आँकलन गरिएको छ । भिडियो :